नेपालको काउण्टरपछि भारतीय दूत श्यामशरण किन आए काठमाडौं ? | Citizen Post News
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला रोग भएकाले डायलासिस गराइरहेका छन् । उनको थप उपचारको चाँजोपाँजो समेत मिलिसकेको छ । केही दिनमा उनी मिर्गौला प्रत्यारोपणको सम्भाव्यतालाई आंकलन गर्दै अमेरिका जान लागेका छन् । स्वास्थ्यको सम्भावित उपचारको विषयमा बुझ्नका लागि केही समयअघि उनकी नीजि चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह अमेरिका पुगिकेकी थिइन् ।
बाल्टिमोरमा रहेको जोन हप्किंस अस्पतालमा उनको मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी भएको पनि बताइएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यस्तो सिथिलता छैन । उनको चलायमान अवस्था छ । अलिकति पनि विरामी जस्तो व्यवहार छैन । यहि क्रममा उनले नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा पहिलो पटक खुलेर भारत र चीनलाई नेपालका जमिनबाट सेना फिर्ता गर्नका लागि सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
हालै भारतले जारी गरेको आफ्नो नक्शामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेपछि नेपालमा त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन र आलोचना भइरहेको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सम्बोधन गरे पनि चित्त बुझेको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझ्नेगरी भनेका छन्,‘हामीलाई अरुको एक इन्च जमिन चाहिएको छैन, हाम्रा जमिनबाट छिमेकी मुलुकले सेना फिर्ता लगुन् ।’
नेपालमा संविधान जारी भएका बेला भारतका तर्फबाट कुटनीतिक दबाबमात्र होइन, प्रत्यक्ष दबाब आएको थियो । हालका विदेशमन्त्री तत्कालिन भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर संविधान रोक्न आएका थिए । त्यसबेला संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो, सोही कालमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए ।
भारतले ओली सरकारको कार्यकालमा लामो समय नाकाबन्दी लगाएको थियो । राष्ट्रवादी चरित्रका आधारमा ओलीको अभूतपूर्व उदय मात्र भएको थिएन, देश विदेश चारैतिर चर्चा थियो । सोही भावनाका आधारमा नै नेकपाको गठबन्धनलाई नेपाली जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएर जिताएका थिए । ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले मानमर्दन गर्नका लागि नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्शामा कायम गरेको भन्ने आम बुझाई छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्,‘सीमा अहिले मिचिएको होइन, दशकौंअघि मिचिएको हो । यसो भन्दैमा हाम्रा भूमीमा विदेशी सेना बस्न पाइन्छ भन्ने होइन, यो तुरुन्त फिर्ता लैजानुपर्छ ।’ चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी चिन फिङको अघिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकबारे सम्झौता भएको थियो । जसको चर्को विरोध नेपाल पक्षकले गरेको थिएन । सोही सम्झौताका आधारमा भारतले नयाँ नक्शामा नेपाली भूमी राखेको हुन सक्ने धेरैको बुझाई छ ।
यद्यपि चीनले भने यो विषय गलत रहेको प्रस्ट पारेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपालको भूमी, सार्वभौमिकताबारेमा चीन प्रस्ट रहेको जनाउँदै यस्ता हल्ला गलत रहेको जिकीर गरिसकेको छ । तर भारतले भने यस विषयमा गहन प्रष्टोक्ति राजनीतिक तबरबाट गरेको छैन । उसले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपालको भूमी नमिचिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सीमामा समस्या रहेको विषय नयाँ भने होइन । ओलीकै अघिल्लो कार्यकालमा सीमा समस्या हल गर्नका लागि राजनीतिक तहमा उच्चस्तरीय प्रबुद्ध समूह (इपिजी) गठन गरी विभिन्न तहमा बैठक भएका थिए । जसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीले बुझिसकेका छन् । तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसम्म बुझेका छैनन् । त्यसैले नेपाली सीमाबारे भारत गम्भिर नरहेको भन्ने शंकाकाबीच कालापानीको विषय भारतीय नक्शामा समेटिएपछि शंका स्वभाविक बनेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यता, यस्तो विवाद चलिरहेका बेला नेपालका लागि तत्कालिन भारतीय राजदूत, तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री श्यामशरण नेपाल आएको स्रोतले जनायो । भारतविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन भएको र सीमाबारेको गम्भिर विषयमा कुराकानी गर्नका लागि भारतीय संस्थापनले उनलाई काठमाडौं पठाएको जनाइएको छ । श्यामशरण तिनै हुन् जसले राजसंस्था भारतको आडमा फ्याँकिएको र माओवादी युद्धलाई मलजल गरेको विवरणसहित पुस्तक निकालेपछि नेपालमा विवाद भएको थियो ।